လတူထ့လတညဖငိဘတ — Steemit
minbonekhant (50)in #esteem •4years ago (edited)
တစ်ဦးက New ဘာသာစကားကိုသင်ယူသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအလားအလာကူညီပါနိုင်သလား5နည်းလမ်းများ
ဆက်သွယ်ရေးစစ်မှန်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ currency.It ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပို. ပို. အပြန်အလှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကိုလှိမ့၏ဘီးကိုစောင့်သောအရာဖြစ်ပါသည်။
အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်း (စာသား) နှစ်ဦးစလုံးလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလုံးကမ္ဘာသစ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတျသကျပွီးဘာ - အောင်မြင်မှုများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်တစ်ဦးအသာစီးပေးအသစ်တစ်ခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနိုင်မလဲ?
အဖြေ "ဟုတ်ကဲ့" တဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်အသစ်တစ်ခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလားအလာတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်5စိတ်ကူးအကြောင်းပြချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထံမှခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ, ဘဏ်လုပ်ငန်းကနေဥပဒေနှင့်အစိုးရအလုပ်ကနေ teaching.Demand မှစကားပြန်နှင့်ဘာသာပြန်များများအတွက်အခုအချိန်မှာမြင့်တက်သည်နှင့်သင် thepile ifyour languageskills arestrong ၏ထိပ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရရှိနိုင်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီယူရိုလန်ဒန်ကနေသုတေသနအညီ, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားစကားပြောသငျသညျပွောဆိုသဖြင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများအဖြစ်တာ 15 ခုအဖြစ်% အားဖြင့်သင့်ဝင်ငွေပါဝါတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးပိုကောင်းသင်သည်ထိုသူတို့ပြောပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သင်ပိုမိုမြင့်မား wagesyoudesire ရဖို့ရှိပါတယ် ။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းကိုမကြာသေးမီကသင် pack ကိုအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်သူတို့အားအပိုဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတင့် barriers.If ပြည်ပမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုသူကုမ္ပဏီများက 60% ကြောင့်ဘာသာစကားပြန်လည်ကျင်းပကြသည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုများအတွက်သိချင်စိတ်တစ်ခုပွင့်လင်းစိတ်နှင့်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းစည်းကမ်းပြ - အလုပ်ရှင်များကကြည့်ရှုကြသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှု, သင်စကားလုံးများနှင့်အခြားဘာသာစကား၏သဒ္ဒါကိုသင်ယူရန်စတင်ရေခြားမြေခြား interests.As နှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့က, သငျသညျ alsostarttounderstandthatwe 'တစ်ဦးအပြန်အလှန် world.Many အလုပ်ရှင်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်တက်ကြွစွာယဉ်ကျေးမှု sensitive.Many နေသောလူမျိုးလည်း, ဤကျွမ်းကျင်မှုအင်္ဂလိပ်စကားပြောပင်အခါ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် interaction ကအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီယုံကြည်ထွက်ရှာကြသည်။
ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်မှာတော့သင်တစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်အနားပေးသည်တစုံတခုကိုမျှသင်၏အ prospects.Often တိုးတက်လာဖို့ကူညီပေးပါမည်, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများတူညီပွဲချင်းပြီးများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများခွဲခြားသောအရာများမှာ - သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြား culturehelpsyouifyouneedtotravelabroadorinteractwithforeignersaspartofyourjob နားလည်သဘောပေါက်၏ရေခြားမြေခြား interests.Demonstrable အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် အခြားဘာသာစကားများ၏အခြေခံဆုပ်ကိုင်ပိုကောင်းသူတို့ကိုသင်မပြောတတ် you.But များအတွက်တံခါးများဖွင့်နိုင်သည် .Even, ပိုကောင်းသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း prospects.Often ကြောင့် toincreased responsibilityand withthat comebetter prospectsand betterwages ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
Lex Baker က franchise WSE ရဲ့ franchise စီမံခန့်ခွဲမှု & ဖွံ့ဖြိုးရေးဒါရိုက်တာနှစ်ခုကျော်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ WSE များအတွက်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူလူမျိုး '' lives.He အပေါ်ရှိသည်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယခုအသစ်အ marketsthroughtheirestablished & provenfranchisemodel ဖို့ WSE concept ကိုဆောင်ခဲ့အပေါ်အဓိကထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးလက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီ သင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းအခွင့်အလမ်းများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပုံကိုအကြောင်းပိုမိုကွားရချင်ပါတယ် အကယ်. , Lex Baker ကိုဆက်သွယ်,
#good-karma #smartphonephotography #myanglish #life
4 years ago in #esteem by minbonekhant (50)
aungyeyint (43)4years ago
ဘဝ ကိုေနတဲ့အခါမွာ အရင္ဦးဆံုး ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္ဖို႔ အရင္သင္ယူပါ...။
Kyay zuu parr kweee
Par twe pyaw nar lal. Bar mha theet buu
ဟုဆ္​ပါတယ္​ ဟုပါ​ေ​ဒ မင္​းမွန္​ပါ​ေဒ
Server time: 15:30:00 Account Level: 1
Total XP: 119.20/200.00
Server time: 08:09:27 Account Level: 1
Total XP: 124.45/200.00
linmyatkoko (50)4years ago
လာဘုတ္ေပးပါ မလာရင္လဲ ရတယ္
mgmgnaing122 (42)4years ago
အလြမ္းမ်ားနက္ ဒီအခ်ိန္မင္းကိုငါ ျကယ္စင္မ်ားထဲ လိုက္လို႕ရွာ.... အေဖာ္ရယ္မပါ ဂစ္တာေလးထက္မွာ သံစဥ္ငိုသံေတြၾကားရ...။
Hoke tal lay , bal thu ka bar phyit loz
Bar Mhan Tout ma buu spam Kyout loe like ment nay tar byar
steemitloves (36)4years ago
ဟုတယ္​​ေလ ဟုတယ္​​ေလ ။
မိုက္​တယ္​​ေနာ္​ 😁😁😁 အလႀကိးနဲ​ေနာ္​ဝဝဝဝ
အိမ္​း ပါ​ေပ်ာ့တာလဲ နာ့မလည္​ပု